Myanma News » အဖေကြီးပီးဒေါ့ အမေကြီး PaPa MaMa	11
ကထူးဆန်း says: ဟတ်ချိုး ဟတ်ချိုး
ခင်ဇော် says: တို့ ကတော့ …
naywoon ni says: ဟုတ်​ပါ့ဗျာ ကျုပ်​တို့ လူမျိုး​တွေရဲ့ အကျင့်​စရိုက်​ စည်းကမ်းမဲ့ မှု တ ရာအုပ​ဓေ အားနဲ မှု​တွေ ကို ​ပြောင်းလဲ​ပေးမဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​ မ​မွေး​သေးဘူးထင်​ရဲ့
လာလ​ရော့ ​နောက်​ထပ်​နှစ်​ငါးဆယ်​ ဒန့်​တန့်​တန်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ခက်(စ) တယ်။
မိန်းမ ဖြစ်နေတဲ့ အမှုနဲ့ အထင်မကြီး၊ မရှိ ရှိတဲ့ အပြစ်ထောက်ချင်နေရင်တော့ မဟာ ယောက်ကျားဂျီး ဝါဒ ရှင်တွေလို့ သတ်မှတ်တယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ခြစ်​ကိုယီး ​ရေခဲတုံးဇူလိုင်​ ကိုဝန်းယံဂျ
pooch says: ဆိုတော့ ဘာဖြစ်ချင်တာတုန်း ဦးကြောင်က
မကျေနပ် ပြန်လာခဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှင်းကြည့်ပါ့လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဂျစ် ကြောင်ကြောင် (မျက်နှာ ပြုံးပြုံးလေး နဲ့ နော်၊ လက်မှာ ဓားပါတယ်) မြန်မာပြည်ထဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက စက် ကို ခိုင်းဖို့ အတွက် ကပ်စတန်မာ တွေ ရှိရာ ကို သွား၊ စကားပြော၊ လက်ရှိ သူတို့ လုပ် နေတာတွေ ကို ကြည့်၊ နောက်ထပ် သူတို့ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ မှတ် ပေါ့။
ကိုရင်စည်သူ says: ဂျားနေ၀ါဒ အလိုမရှိ.. ဂျားနေတယ်ဆိုတာ ဖိနှိပ်သူတွေကို အားပေးဒါနဲ့ တူတူပဲ..။
ကြောင်ကြီး ဂျားမချနဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: ပပနဲ့ မမ ဘယ်သူ ပိုလှလဲ
Wow says: ဘုပြောဘေးထိုင် တောက်ကြောင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (ကျွန်မ တို့ အသံ တွေ ကို သူနားထောင် နေပါတယ်။
ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယုံကြည်တယ်။ ကြောင်ကြောင်ရဲ့အသံလည်း သူကြားမိမှာပဲ။
အားမငယ်နဲ့ အော်သာအော်…………. ကြောင်ကြောင်ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ နေရာကို ယူနေတာများလားးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.